परिवर्तन भयो किलोग्राम ‘केजी’को परिभाषा – onlinedarpan:
Posted on November 18, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 72 Views
वैज्ञानिकले किलोग्राम ‘केजी’को परिभाषा परिवर्तन गरिदिएका छन्। पचास भन्दा बढी देशले परिभाषा परिमार्जन गरेर नयाँ परिभाषा निर्माणगर्न सर्वसम्मत मन्जुरी दिएका हुन्।
नयाँ किलोग्राम सन् २०१९ सम्म आउने विश्वास गरिएको छ।वर्तमानमा केजीलाई प्लेटिनमबाट बनेको एक सिलको वजनबाट परिभाषित गरिएको छ। जसलाई ‘ली गै्रन्ड’ भनिएको छ।
यस्तो एक सिल पश्चिमी पेरिसमा ‘इन्टरनेसनल ब्यूरो अफ वेट्स एण्ड मेजर्स’ (बीआइपीएम) मा सन् १८८९ देखि बन्द छ।
फ्रान्सको वर्साइल्समा ‘वेट एण्ड मेजर्स’ मा एक ठूलो सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। जहाँ कैयौं वैज्ञानिकले भाग लिएका थिए। यसमा किलोग्रामको परिभाषा बदल्नका लागि भोट भएको थियो। त्यसपछि यसको फैसलामा छाप लगाइएको थियो।
अधिकांश वैज्ञानिकले किलोग्रालाई यान्त्रिक र विद्युतीय चुम्बकीय उर्जाको आधारमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। यद्यपी वेलायतमा ‘नेसनल फिजिकल लेबेरोटरी’ वैज्ञानिक पेर्डी विलियम्सले यसको बारेमा मिश्रीत विचार दिएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘म लामो समयदेखि यस कार्यमा जोडिएको छैन यद्यपी किलोग्रामको मापनलाई मन पराउँछु। यो आफैमा महत्वपूर्ण पल र राम्रो कदम हो। नयाँ तरिकाले राम्रो काम गर्नेछ।’
किलोग्रामलाई किन परिवर्तन गरियो?
किलोग्राममा नयाँ परिवर्तनले मानिसको दैनिक जीवनमा कुनै प्रभाव पार्दैन। उद्योग र विज्ञानमा यसको व्यवहारिक प्रयोग हुने विश्वास लिइएको छ।
किनभने नयाँ किलोग्राम प्रणाली सटीक मापन गर्ने तरिका हो। अन्तर्राष्ट्रिय मात्रक प्रणालीमा किलोग्राम ७ आधारभूत एकाइमध्य एक हो। सातमध्ये चार हुन्– किलो, एंपियर (विद्युत प्रवाह), केल्भिन (ताप), मोल। किलोग्राम अन्तिम एसआइ एकाइ हो।
जसलाई एक भौतिक वस्तुबाट परिभाषित गरिएको छ। ‘ली ग्रेन्ड’ लण्डनमा निर्मित ९० प्रतिशत प्लेटिनम र दश प्रतिशत इरिडियमबाट बनेको चार सेन्टिमिटरको एक सिलेन्डर हो, जुन पश्चिमीपेरिसको इन्टरनेसनल ब्यूरो अफ वेट्स एण्ड मेजर्स (बीआइपिएम)को कोठामा सन् १८८९ देखि बन्द छ।
किनभने भौतिक वस्तुले सजिलै परमाणुलाई गुमाउन सक्छ अथवा अणुलाई सजिलै सोच्न सक्छ। जसको कारण यसको मात्रा माइक्रोग्राममा दशौं पटक बदलिएको थियो।
यसको मतलब किलोग्राम र स्तर मानका लागि विश्वभरमा प्रोटोटाइपको उपयोग गरिन्छ, जसले एकदम सही अशुद्धी बताउँछ। सामान्य जीवनमा यस्ता सामान्य परिवर्तन देखिँदैन। तर, सटीक वैज्ञानिक गणनामा यो बढी समस्याको रुपमा देख्ने गरिएको छ।
भविष्यमा किलोग्रामलाई वाट ब्यालेन्सको उपयोग गर्न र त्यसको मापन गर्न प्रयोग गरिनेछ। जसले यान्त्रिक, विद्युतीय र चुम्बकीय उर्जाको उपयोग गरेर सटीक गणना गर्न मिल्नेछ। यस्तो भएपछि किलोग्रामको परिभाषा बदलिने छैन, बदल्न सकिने छैन।
यसले कुनै नोक्सान समेत पुर्याउने छैन। यसले फ्रान्समा मात्र होइन विश्वमै एक किलोग्रामको सटीक मापन उपलब्ध गराउनेछ।
वेलायतको राष्ट्रिय मानक प्रयोगशालाका अनुसन्धान निर्देशक थियोडोर जैनसेन भन्छन्, ‘वैज्ञानिक मापनमा एसआइ एकाइको पुनः परिभाषित गर्नु एक यादगार क्षण हो।
एक पटक लागू भएपछि सबै एकाइ ‘फन्डामेन्टर कन्स्टेन्ट’ को प्रकृतिमा आधारित हुनेछ। जसको मतलब त्यसपछि सँधैका लागि सटीक मापन गर्न आधार बन्नेछ।’
नयाँ किलोग्राम सन् २०१९ सम्म आउने विश्वास गरिएको छ। यसको मापन विद्युतीय पम्पको माध्यमबाट गर्न सकिनेछ।
एक पटक प्रवाहित विद्युतले औसत करेन्ट उत्पन्न गरेर किलोग्रामको गणना गर्नेछ। केल्भिन तापमान एकाइ परिभाषित गर्न ध्वनीको प्रयोग हुने थर्मोमिटरको उपयोग गरिनेछ, जुसले एक निश्चित तापमानमा ग्याँसले भरिएको क्षेत्रमा ध्वनीको गतिको मापन लिनेछ।
पदार्थको मात्रा मापन गर्नका लागि मोल, एकाइको प्रयोग गरेर फेरि परिभाषित गरिनेछ। जसले शुद्ध सिलिकन–२८ मा सही मरमाणुको मात्रा निर्धारित गर्नेछ। -बीबीसी हिन्दीबाट अनुवाद गरिएको
Share8TweetGoogle+Pin08sharesकाठमाडौं- दैनिक जीवनमा हामी कैयौं उपकरण प्रयोग गर्छौंं । तीमध्ये कतिपय उपकरण चलाउँदा हामीलाई त्यो कसले कहिले बनायो होला भन्ने जिज्ञासा हुन्छ । त्यसैले केही प्रमुख उपकरण, तिनका आविष्कारक र आविष्कार भएको मितिबारे जानिराखौं– के ? कसले ? कहाँ ? कहिले ? घडी, क्रिस्चियन हयुगेन्स हल्यान्ड–१६५६ स्टोभ विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…